Ny tena hazavana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Ny tena jiro
Hanao ahoana ny famirapiratan'ny jiro amin'ny fotoan'ny Krismasy raha tsy misy jiro? Ny tsenan'ny Krismasy dia mafana indrindra amin'ny takariva, rehefa manaparitaka ny toe-po Krismasy romantika ny jiro maro. Miaraka amin'ny jiro be dia be, mora ny manadino ny tena hazavana namirapiratra tamin'ny Andro Krismasy. “Izy (Jesosy) no nisiam-piainana, ary fiainana no fahazavan’ny olona” (Jaona 1,4).
Tamin’ny andro nahaterahan’i Jesosy tao Betlehema, 2000 taona mahery lasa izay, dia nisy lehilahy antitra atao hoe Simeona nipetraka tany Jerosalema. Nambaran’ny Fanahy Masina tamin’i Simeona fa tsy ho faty izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Indray andro, ny Fanahy dia nitondra an’i Simeona ho ao an-kianjan’ny tempoly, ilay andro nitondran’ny ray aman-drenin’i Jesosy ny zaza mba hahatanteraka ny zavatra takin’ny Torah. Rehefa nahita an’ilay zaza i Simeona, dia nitrotro an’i Jesosy izy ary nidera an’Andriamanitra nanao hoe: “Tompo ô, avelao ny mpanomponao handeha soa aman-tsara araka ny voalazanao; fa ny masoko efa nahita ny Mpamonjy anao, dia ny famonjena izay namboarinao teo anoloan’ny firenena rehetra, dia fahazavana ho fahazavan’ny jentilisa sy ho fiderana ny Isiraely olonao » (Lio. 2,29- iray).
Jiro ho an'ny jentilisa
Nidera an’Andriamanitra i Simeona noho ny zavatra tsy azon’ny mpanora-dalàna, ny Fariseo, ny mpisoronabe ary ny mpahay lalàna. Tsy ho famonjena ny Isiraely ihany no nahatongavan’ny Mesian’ny Isiraely fa ho famonjena ny firenena rehetra eran-tany koa. Efa naminany ela be i Isaia hoe: “Izaho Tompo dia efa niantso anareo tamin’ny fahamarinana sy nihazona anareo tamin’ny tananao. Izaho no namorona anao sy nanao anao ho fanekena ho an'ny firenena, ho fahazavan'ny jentilisa, mba hampahiratra ny mason'ny jamba sy hamoahanao ny mpifatotra hiala ao an-trano-maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-davaka. » (Isaia 4.2,6- iray).
Jesosy: Isiraely vaovao
Ny Israelita no olon’Andriamanitra. Nantsoin’Andriamanitra hiala tamin’ny firenena izy ireo ary nanokana azy ireo tamin’ny alalan’ny fanekempihavanana ho vahoakany manokana. Tsy ho azy ireo ihany no nanaovany izany, fa ho famonjena ny firenena rehetra. "Tsy ampy ny ho mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba sy hampody ny Isiraely izay efa niely patrana, fa efa nataoko fanazavana ho an'ny firenena kosa ianao, mba hihatra amin'ny famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany" Isaia. 49,6).
Noheverina ho fahazavana ho an’ny Jentilisa ny Isiraely, saingy maty ny fahazavany. Tsy nitandrina ny fanekempihavanana izy ireo. Kanefa Andriamanitra dia mitoetra ho mahatoky amin’ny fanekeny, na inona na inona tsy finoan’ny vahoakan’ny fanekeny. « Inona izao? Raha nivadika ny sasany, moa manafoana ny fahatokian’Andriamanitra ve ny tsy fivadihany? Sanatria izany! Fa izany no mitoetra: Andriamanitra dia marina ary ny olona rehetra dia mpandainga; araka ny voasoratra hoe: “Mba ho marina ny teninao, ka handresy amin’ny mahitsy ianao” (Romana 3,3- iray).
Koa amin’ny fahafenoan’ny fotoana, Andriamanitra dia naniraka ny Zanany ho fahazavan’izao tontolo izao. Izy no Isiraelita lavorary izay nitandrina tsara ny fanekena tamin’ny naha-Israely vaovao azy. “Tahaka ny nahatongavan’ny fanamelohana ny olona rehetra noho ny fahotan’Ilay Tokana, no nahatongavan’ny fanamarinana ho an’ny olona rehetra kosa noho ny fahamarinan’Ilay Tokana ho amin’ny fiainana”. (Romana 5,18).
Amin’ny maha-Mesia nambara mialoha, solontena tonga lafatra ho an’ny vahoakan’ny fanekena sy fahazavana marina ho an’ny Jentilisa, i Jesosy dia nanafaka ny Isiraely sy ny firenena tamin’ny ota ary nampihavana azy ireo tamin’Andriamanitra. Amin'ny finoana an'i Jesoa Kristy, amin'ny maha-mahatoky Azy sy ny fifaneraseranao aminy, dia lasa mpikambana ao amin'ny vondron'ny fanekempihavanana mahatoky ianao, dia ny olon'Andriamanitra. “Fa Andriamanitra iray ihany no manamarina ny Jiosy amin’ny finoana, ary ny jentilisa amin’ny finoana” (Romana 3,30).
Fahamarinana ao amin'i Kristy
Tsy afaka manangona fahamarinana avy amin'ny tenantsika irery isika. Rehefa fantatra fa miaraka amin’i Kristy Mpanavotra isika vao ho marina. Mpanota isika, ka tsy marina kokoa noho ny Isiraely. Rehefa miaiky ny fahotantsika sy mametraka ny finoantsika amin’Ilay anamarinan’Andriamanitra ny ratsy fanahy isika vao hoheverina ho marina noho ny aminy. “Fa mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra, ary hamarinina tsy amin’antony amin’ny fahasoavany amin’ny fanavotana izay natao tamin’ny alalan’i Kristy Jesosy” (Romana . 3,23- iray).
Ilain’ny rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra tahaka ny vahoakan’Israely. Izay rehetra manana ny finoana an’i Kristy, na ny Jentilisa na koa ny Jiosy, dia voavonjy satria mahatoky sy tsara Andriamanitra, fa tsy noho ny nahatoky antsika na noho ny nahitantsika lamina miafina na fampianarana marina. “Izy no nanafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka nametraka antsika tao amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany.” (Kolosiana) 1,13).
Matokia an'i Jesosy
Raha tsorina, dia sarotra ny matoky an'i Jesosy. Ny matoky an'i Jesosy dia midika hoe apetrako eo am-pelatanan'i Jesosy ny fiainako. Tsy mahafehy ny fiainako intsony. Tianay ny mifehy ny fiainantsika manokana. Tianay ny mifehy ny fanapahan-kevitsika manokana sy manao zavatra araka ny fombantsika.
Andriamanitra dia manana drafitra maharitra hamonjy antsika sy hiarovana antsika, nefa koa drafitra maharitra. Tsy afaka mandray ny vokatry ny drafiny isika raha tsy miorina mafy amin'ny finoantsika. Ny lohan'ny fanjakana sasany dia manolo-tena mafy amin'ny herin'ny tafika. Ny olon-kafa dia mitazona ny filaminany ara-bola, ny tsy fivadihan'ny tenany manokana, na ny lazany manokana. Ny sasany miorina mafy amin'ny fahaizany na heriny, faharanitan-tsaina, fitondran-tenany na faharanitan-tsaina. Tsy misy amin'ireto zavatra ireto no ratsy na mpanota. Amin'ny maha-olombelona antsika dia mirona isika hametraka ny fitokisantsika sy ny herintsika ary ny fanolorantsika tena aminy fa tsy ny loharanon'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana.
Mandehana manetre tena
Rehefa ankinintsika amin’Andriamanitra ny olantsika ary matoky ny fiahiany sy ny fanomezany ary ny fanafany miaraka amin’ireo dingana tsara ataontsika amin’ny fiatrehana izany isika, dia mampanantena Izy fa homba antsika. Hoy i Jakoba: “Manetre tena eo anatrehan’ny Tompo, dia hanandratra anareo Izy.” ( Jakoba 4,10).
Miantso antsika Andriamanitra mba hamily ny hazofijaliana mandritra ny androm-piainantsika, hiaro tena, hampiroborobo ny tenantsika, hitahiry ny fananantsika, hiaro ny lazantsika ary hanitatra ny fiainantsika. Andriamanitra no mpamatsy antsika, mpiaro antsika, fanantenantsika ary anjarantsika.
Tsy maintsy miharihary amin’ny fahazavana, ny fahazavan’i Jesosy, ny hevi-diso izay ahafahantsika mahazo ny fiainantsika manokana: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao. Izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” (Jao 8,12).
Amin’izay isika dia afaka hatsangana ao amin’ny maty ary ho tonga ny tena maha-izy antsika, zanak’Andriamanitra sarobidin’Andriamanitra izay vonjeny sy ampiany, izay miady amin’ny ady, mampitony ny tahony, mampitony ny alahelony, miombona amin’ny hoaviny ary mitahiry ny lazany. "Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra."1. Johannes 1,7).
Raha mahafoy ny zava-drehetra isika dia handresy ny zava-drehetra. Rehefa mandohalika isika dia mitsangana. Amin’ny fialana amin’ny fahadisoantsika momba ny fifehezantsika manokana, dia mitafy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny haren’ny fanjakana any an-danitra mandrakizay isika. Nanoratra toy izao i Petera: “Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; satria miahy anao izy »(1. Petrus 5,7).
Inona no manelingelina anao? Ny fahotanao miafina? Fanaintainana tsy zaka? Loza ara-bola tsy voavaha? Areti-mandringana? Fahaverezana tsy azo eritreretina ve? Toe-javatra tsy azo tanterahina izay tsy ahafahanao manao zavatra? Fifandraisana manimba sy maharary? Fiampangana diso izay tsy marina? Andriamanitra naniraka ny Zanany, ary amin'ny alàlan'ny Zanany dia mandray ny tanantsika Izy ka manandratra antsika ary mitondra ny fahazavan'ny voninahiny ho any amin'ny krizy mangidy sy mafy izay mahazo antsika. Na dia mamakivaky ny lohasahan'ny aloky ny fahafatesana aza isika dia tsy matahotra fa momba antsika Izy.
Andriamanitra dia nanome antsika ny famantarana fa azo antoka ny famonjeny: «Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra; Indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio, dia Kristy Tompo, ao an-tanànan’i Davida” (Lioka 2,10- iray).
Na aiza na aiza jerenao amin'izao vanim-potoanan'ny taona izao dia misy jiro haingon-trano, jiro fotsy, jiro miloko na labozia mirehitra. Ireo jiro ara-batana ireo, ny taratry ny masony manjavozavo, dia afaka mitondra fifaliana lehibe ho anao mandritra ny fotoana fohy. Fa ny tena fahazavana mampanantena famonjena ho anao sy manazava anao avy ao anatinao dia Jesosy, ilay Mesia tonga teto amintsika teto an-tany ary manatona anao manokana anio amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. “Izany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao.” (Jaona 1,9).
nataon'i Mike Feazell